Ukuphupha ngePetroli Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ipetroli yinto ebalulekileyo kunye nomthombo wamandla kwihlabathi lethu langoku. Sifuna lo mxube unzima wehydrocarbon kwizinto ezahlukeneyo kakhulu. Olona hlobo ludumileyo lokusetyenziswa kwepetroli ngokuqinisekileyo linamafutha emoto. Kubantu abaninzi, ukufaka ipetroli yinto eqhelekileyo kwaye akuniki ngcamango ingako.
Sinokudibana nepetroli emaphupheni. Ukutolikwa kwephupha lepetroli, umxholo wephupha udlala indima ebalulekileyo. Ke ngoko, kubalulekile ukuba ujonge imeko apho uphawu lwephupha "ipetroli" labonakala kuthi. Mhlawumbi siyigcwalisile imoto okanye iphenyane lethu ephupheni? Okanye ngaba sibeke ipetroli enkonkxeni kuba siyifuna kwi-chainsaw okanye kumatshini wokucheba ingca? Zonke ezi nkcukacha zivula amathuba amatsha okutolika.
Ngokunxulumene nepetroli, ioyile, ioyile emnyama okanye ipetroleum nayo ihlala ibonwa emaphupheni. Oku akumangalisi, kuba ipetroli ifunyanwa kwiindawo zokucoca izinto ezingekho mgaqweni: apha "igolide emnyama" impontshelwa kumphezulu womhlaba ngempompo, apho icocwa khona, ifakwe idizili kwaye iphinde isetyenziswe.
Njengomntu ophuphayo, kufuneka ube namava rhoqo ukuze ngesiquphe uzifumane uphuma kwigesi. Nje ukuba sinikele ingqalelo ekhethekileyo kwezi meko zamaphupha. Funda apha ngezantsi ukuba ungalitolika njani eli phupha likhethekileyo.
1 Isimboli yephupha "ipetroli" - amaphupha aqhelekileyo malunga nesimboli yephupha.
1.1 Qalekisa! Ukuphupha akusekho ipetroli, ipetroli ayinalutho
2 Uphawu lwephupha «ipetroli» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «ipetroli» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «ipetroli» - ukutolika kokomoya
Isimboli yephupha "ipetroli" - amaphupha aqhelekileyo malunga nesimboli yephupha.
Qalekisa! Ukuphupha akusekho ipetroli, ipetroli ayinalutho
Ukuba awunayo igesi eyaneleyo ephupheni lakho kwaye ke uyema ngemoto, ngeteksi okanye mhlawumbi nangebhasi, ngokwenyani uhlala uswela amandla kunye namandla. Kwabo baphuphayo, ukuhlangabezana neemfuno zemihla ngemihla kungumboniso wamandla ongalawulekiyo. Ukuba unamava kwimeko yamaphupha amva ukuba omnye umntu ekuzisela njani ipetroli, oku kungabonisa ukuba kukho abantu kwindawo yakho yobuqu abanenkxalabo ngentlalontle yakho. Baza kukunceda xa ugoba amadolo akho kanzima.
Uphawu lwephupha «ipetroli» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokubanzi, uphawu lwephupha "ipetroli" luthathwa njengohlobo lwe amandla itolikwe. Umphuphi kufuneka aqonde ngephupha lakhe ukuba ufuna into kuyo el mundo ukuvuka ukuze baqhubele phambili kuphuhliso lwabo lobuqu. Unokufumana kuphela ukuba yintoni kanye ngokuzihlalutya kunye neemeko zakho. Ukongeza, umfanekiso wephupha "ipetroli" ubonakalisa ukuba ubomi bomntu oleleyo kufuneka buvuselelwe.
Ngamanye amaxesha, ipetroli iphupha ikwabonisa imeko ekuvukeni kobomi, ekufuneka ulwe kuyo. Ngaphandle koko, ngekhe ukwazi ukubalawula. Kodwa ipetroli njengophawu lwamaphupha ikwabonisa Ukulwa okanye umlilo. Ukuphupha kufuneka ulumke kokubini kwihlabathi elivukayo, kuba kungenjalo kunokuba yingozi kuye.
Nabani na obona i-petroli ephupheni lakhe uya kuza ngokukhawuleza Umdla Kuya kufuneka ujongane nayo kulula ukuyilayita, kodwa icime ngokukhawuleza okukhulu. Ukongeza, le meko yamaphupha ingabonisa imisebenzi emitsha, egwetyelwa yinzondelelo yomntu kunye nomzamo wakhe.
Njengephupha, i-biofuel evela kudlwengulo inokuhlala ibhekisa kwiingxaki ekuvukeni kobomi, ezingaziwa ngabanye.
Uphawu lwephupha «ipetroli» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lohlalutyo lwamaphupha, uphawu lwephupha "ipetroli" luphawu lokukhuthaza kunye nokusetyenziswa kwamandla. Kwakhona, oleleyo mayibe yeyakho isigqibo yazi ngendlela owenza ngayo izigqibo ebomini bokuvuka. Kwiimeko ezininzi, ipetroli ikwabonisa amandla anomdla nothandekayo ephupheni, nawo abasa lula.
Nabani na ogcwalisa imoto ngepetroli kwisikhululo segesi ephupheni lakhe ufumana ingcebiso yokuba kufuneka awukhathalele ngakumbi umzimba wakhe. Ukuba ephupheni ingozi kunye nokutsha ngokulula kwepetroli kuphambili, umntu ophuphayo kufuneka aboniswe yinto yokuba ebeka amandla akhe kwimicimbi eyingozi kwilizwe elivukayo. Ke kuya kufuneka ulumke kungenjalo ukwenzakala kunye nengxaki zinokwenzeka ngokulula.
Ukutsha kwepetroli njengophawu lwephupha kuthathelwa ingqalelo kutoliko lwengqondo ngephupha njenge uphawu oluhle Iqondwa ngentsebenziswano okanye ubudlelwane. Nangona kunjalo, oku akuyi kuhlala ixesha elide. Ukuqhuma kwepetroli ephupheni kuhamba kunye nokukhumbuza iphupha. Kuya kufuneka ulawule umsindo wakho ukuze ungenzi imeko eyingozi.
Uphawu lwephupha «ipetroli» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya kutolika uphawu "petroli" njengophawu lwe amandla y okwakhiwa kummandla ogqithisileyo.